Fadhigii Baarlamaanka maanta oo laga dhaxlay dhimasho rayid | KEYDMEDIA ONLINE
Fadhigii Baarlamaanka maanta oo laga dhaxlay dhimasho rayid
Muqdisho(keydmedia) Fadhigii Xildhibaanada Baarlamaanka KMG ah Soomaaliya maanta ay ku lahaayeen xarunta golaha Shacabka ee Magaalada Muqdisho ayaa laga dhaxlay dhibaato dhimasho iyo dhaawac ah oo soo gaartay rayidka Soomaaliyeed.
Dhimashada iyo dhaawaca ayaa timid kadib markii xoogaga Dowlada ka soo horjeeda ay duqeyeen xarunta golaha shacabka ee uu kulanka ka socday isla markaana Ciidamada Amisom ay jawaab culus ka bixiyeen duqeymahaasi.
Inta la ogyahay ilaa iyo hadda waxaa ku geeriyootay 20 ruux in ku dhaw iyadoona ay ku dhaawacmeen dad tiradooda ay kor u dhaafeyso 50 ruux oo rayid ah, kuwaa oo ku kala sugnaa degmooyinka Hodan, H.wadaag, Xamarweyne, waabari iyo qeybo ka mid ah gudaha Suuqa bakaaraha.
Madaafiicda qaarkeed ayaa ku dhacday afaafka hore ee xarunta golaha shacabka waxaana seddex ruux ay ku dishay Madaafiicda ilinka hore ee Masaajidka isbaheysiga Islaamka oo ka soo horjeeda golaha shacabka iyadoona ilinka hore ee golaha shacabka ku dhaawacday xildhibaan magaciisa lagu soo koobay Shiikh Cabdi.
Fadhiga baarlamaanka ee maanta ayaa mudanayaasha waxa ay ka doodayeen mooshinkii laga keenay Xukuumadda iyadoona kulankaasi ay ka qeyb galeen 300 oo ka mid ah Xildhibaanada ayaa 296 ka mid ah waxa ay isku raaceen in xukuumada cod kalsooni ah loo qaado.
Maalinimada sabtida ah ee soo socota ayaa loo balansanyahay cod u qaadista xukuumada walow ay suurta gal tahay in ay wax is badalaan maadaama maanta uu dib ugu soo laabtay gudaha Magaalada Muqdisho Shariif Xasan Shiikh Aadan oo ah gudoomiyaha Baarlamaanka.